अन्तिम मान्छे | मझेरी डट कम
editor — Mon, 05/30/2016 - 04:09
“तिमी मलाई छाडेर कसरी जान सक्छौ यसरी ? हामी जीवनको अन्तिम सँघारमा पुगिसकेका त छैनौँ ।”
सकिता कदाचित् आवेशमा थिइन । ऊ आफ्नो अनूनयलाई कृत्रिम आवरण दिइरहेकी थिई । आवाजमा न्यानो अनुरोधभन्दा औपचारिकता बढी मिसिएको थियो ।
“जीवन यात्राको कुरा गर्ने गर्थ्यौ नि तिमी ? अब आएर यात्रामा म रहन्न भनेर कसरी सम्झायौ तिमीले आफैँलाई ?” सकिता भावनालाई शब्दमा पोखिरहेकी थिई ।
“मसँग तिमीलाई दिने कुनै जवाफ छैन । उत्तर दिन आवश्यक पनि ठान्दिनँ । तिमी मभित्र मक्किएका सम्झौताका उल्झन खडा गर्ने कोसिस नगर । एकतर्फी सम्झौताको के प्रसंग उठाउने अब ?”
मीनबहादुरको आवाजमा असीम आवेश मिसिएको थियो । सायद यो स्वाभाविक थियो ।
“बस यहाँ आरामले । तिमीले भूल्यौ, आफ्ना अठोटहरू अनि ती वाचाहरू ?” फेरि प्रश्नहरूलाई जोड्ने प्रयास गरी सकिताले ।
ऊ सायद परिवर्तन चाहन्छ । आवाजमा तिक्तता झल्किन्छ । “तीन वर्षसम्मसँगै बस्दा हामीबीच कुनै त्यस्तो त भएन, जसले गर्दा आज तिमी मलाई रोक्न सक । हामीले एकअर्कालाई माया पनि त गरेनौँ सायद ।”
“के म यति टाढाको पराई भइसकेँ तिम्रा लागि ? जीवन भोगाइको परिवेश त फरक भएको होइन हाम्रो !”
“तिमीलाई माया गर्नेहरूको भीडमा म त पर्दिन नि हैन र ? एउटै छानोमुनि बस्दैमा एकअर्काप्रति समर्पणका भावहरू प्रकट हुनु आवश्यक पनि त हुँदैन सायद ।”
ऊ यथार्थको भुमरीमा पछारिएको थियो । समयले ल्याउने परिवर्तनहरू प्रिय मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि त हुँदैन । आफूबाट समेटिन नसकेको जीवनलाई फर्केर यसो चिहाउन खोज्यो उसले । शून्यतामा बिलाउन सकेनन् ती यादहरू । उसको शालीनता र सदाचारले उसलाई चोखो देखाउन सकेको थिएन । जीवनका अवयवहरू छताछुल्ल पोखिएका छन् परिवेशभरि । ती अवयवहरूलाई सँगालेर आफ्नो परिभाषा निर्माण गर्न पनिसकेको छैन उसले ।
फकल्यान्डको लडाइँले निमिट्यान्न बनाउन नसकेको स्पर्शविहीन भावनाहरू चोटग्रस्त बनिरहने गरेका छन् । अनायास सुरु भएको थियो त्यो कहानी, जसलाई उसले कर्तव्य मानेको थियो, त्यो अन्यथा बनेर उभिएको छ । ऊ पीडादायी विगतलाई पछाडि छाडेर अगाडि बढ्न कटिबद्ध बनेको छ एकप्रकारले । ऊ भूल्न चाहन्छ त्यो कहालीलाग्दो विस्मयकारी विगतलाई ।
वातावरण चिसो छ । परिस्थिति उसको पक्षमा छैन सायद । ऊ लडाइँ जिते पनि जीवन हारेको मान्छे ठान्छ आफूलाई । उसका आफ्ना भन्ने मान्छेहरू छैनन् । जसलाई उसले आफ्नो ठानेको थियो, ऊ विद्रोही बनेकी थिई । ऊ जाओस् पनि कता ? जाने कुनै ठाउँ छैन । कुनै गन्तव्य छैन ।
मन्दमन्द चिसोले काठमाडौँको वातावरणमा कठोरता भर्दै थियो । मीनबहादुरले झोलाभित्र जीवनका उल्झनहरूलाई थन्क्याइरहेको छ । जीवनले थुप्रै थकाइ दिएको छ उसलाई । विद्यालयदेखि गाउँ र बस्तीभरि ऊ एउटा पहिचानभन्दा पनि अरूको सहयोगीको भूमिकामा पोखिइरह्यो । बस्तीबाट बाहिरिएपछि ऊ एउटा सडकमा बाँच्ने अभ्यस्ततामा पुग्यो । गरिएका उपलब्धिहरूले कुनै रचनात्मक परिणाम नदिएपछि ऊ आफ्ना उपलब्धिविहीन यथार्थहरूलाई किल्लामा झुन्ड्याएर फुर्सद लिन हतारिएको पनि थिएन । ऊ सधैँ अघि बढ्ने तरखरमा हुन्छ तर अगाडिको यात्राले उसलाई अड्काउने गर्छ । एउटा अथक् र पृथक् हिँडाइको अपेक्षा बोकेर ।
“तिमी यहाँबाट गई हाल । त्यही नै ठिक होला मलाई ।” ऊ स्तब्ध पनि छैन ।
मीनबहादुरले फर्किएर सकितातर्फ हेरेन । बाटोमा सन्नाटा व्याप्त छ । ऊ बाटोमा मिसिएको छ । बाटोले उसलाई आफ्नो ठानेको पनि छैन सायद । अलिकति हिँडेपछि पाइलाहरू बोझिल भएजस्तो महसुस गर्‍यो उसले । सायद सकिताले बढाएको उल्झन र उसले पुर्‍याएको चोटलाई भूल्न चाहन्छ ऊ ।
“तिमीबिना म बाँच्ने कुरा भएन । तिमी फर्किंदैनौ भने म पनि बाँच्दिन अब । सायद आँधीखोलामा हामफालेर मर्छु म ।” ऊ हुँक्क हुँक्क गरेर रुन थाली ।
प्रकाशित: फाल्गुन २७, २०७२
तिम्लाई देख्ने मेरा आखा
किन यस्तो विचित्र
जाडो कता त्यो गयो
रिसाउँदा नि आफ्नै खुसी हुँदा नि आफ्नै
घुनपुत्ली परेकाे छ
सुन एउटा पात्र आउछ
जीमूतदेखि मनोजसम्म महाकाव्यः एक चिनारी